कठै ! १५ वर्षकि सानी नानीको यस्तो अवस्थामा ला श भेटियो,बहिनीलाई मा रेको हो भन्दै दाजु जंगीए (भिडियो हेर्नुस्) -
Home News कठै ! १५ वर्षकि सानी नानीको यस्तो अवस्थामा ला श भेटियो,बहिनीलाई मा...
कठै ! १५ वर्षकि सानी नानीको यस्तो अवस्थामा ला श भेटियो,बहिनीलाई मा रेको हो भन्दै दाजु जंगीए (भिडियो हेर्नुस्)
मोरङ जिल्लाको कानेपोखरी भन्ने ठाउमा एकदमै डरलाग्दो अनि र’ह’स्यमय घ”टना घ”टेको छ । एक १४ बर्षकि बालिका मकैबारिमा र’ह’स्यमय तरिकाले मृ’त फेला परेकि छिन । मृ’त’क बहिनिका सन्तोष नाम गरेका दाजु आज मिडियासामु आएका छ्न । आफ्नो बहिनिको ह’त्’या नै भएको बताउछ्न उनि ।
आफ्नो क’म’जो’र आर्थिक अबस्था रहेको र आफ्नो बहिनिले कुनै हालतमा न्या’य पाउनुपर्ने बताउछ्न उनि । अहिलेसम्म एउटा केही बिराम नलागेको उनकि बहिनि यसरि एकाएक मृ’त फेला पर्दा उनी तीन छ’क्क परेका छन । सामान्य ज्याला मजदुरी गरेर जिबनयापन गरिरहेका सन्तोषलाई बहिनिको मृ’त्युपछि ठूलो झ’ट्’का परेको छ ।
आफ्नो बहिनिको मृ’त्यु हुदा उनि भने घरमा नरहेको कुरा पनि उनले खुलाए । उनकि बहिनिको ह’त्”याको आरोपमा प्रकाश खड्का नाम गरेका पुरुष शं’काको घेरामा रहेको कुरा पनि उनले खुलाए । उनका दुबै बहिनिहरु मामा माइजुको काममा जाने गरेको तर केही समयपछि ठुली बहिनीको भने पैसामा कुरा नमिलेकोले नजाने गरेको कुरा पनि उनले बताए ।
घटनास्थलमा घुडाघुडा पानी रहेको कुरा पनि उनले खुलाए । आफ्नो बहिनिलाइ १० रुपैयाको पनि औषधि नगरेको र केही रो’ग पनि नभएको बताउदै यो ह’त्या नै रहेको कुरा उनले खुलाए । घरबाट भैंसी चराउन लिएर गएकी बहिनी आधा घण्टामा नै मृ’त फेला पर्दा कुन दाजुको चाहिँ मन न’दु’ख्ला र ।
Previous article६० वर्षको उमेरमा कलेज पढ्दै छिन् यी आमा,स्कुल पुग्दा यस्तो रुवा बासी भयो (भिडियो हेर्नुस्)
Next articleअनिता खड्का बोल्न हिड्न नसक्ने भएपछि अस्पतालमा चल्यो रुवाबासी,फेरी पुरानै अबस्थामा फर्कीइन अनिता (भिडियो)